Caterpillar တို့, လမ်းကြောင်းလေ့ကျင့် discontinues အခန်းတစ်ခန်းနှင့်မှတ်တိုင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်း - တရုတ်နိုင်ငံ Tianjin Longtop သတ္တုတွင်း
အဆိုပါကုမ္ပဏီမဟာဗျူဟာမြောက်အခြားနည်းလမ်းရှာဖွေစူးစမ်းကအကြီးမြတ်ဆုံးတိုးတက်မှုအလားအလာရှိသူများထုတ်ကုန်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ Caterpillar တို့ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ကုန်သည်တွေတည်ဆဲဖောက်သည်ကျူးလွန်ရှိနေဆဲနှင့်ထိုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်မဏ်ဍိုငျကိုထောကျပံ့များနှင့်လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းသင်္ဘောအုပ်စုတွေကိုခြေရာခံပါလိမ့်မယ်သူကဆက်ပြောသည်။
Denise ဂျွန်ဆင်, အရင်းအမြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တာဝန်နှင့်အတူအုပ်စုသည်သမ္မတက "Caterpillar တို့ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနှင့်အတူ align ထားတဲ့အဲဒီရွေ့လျား, ကျွန်တော်တို့ကိုအမြင့်မားဆုံး, ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အကောင်းဆုံးရေရှည်ပြန်ပေးသောလုပ်ငန်းအဲဒီဒေသတွေမှာပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်များကိုအာရုံစူးစိုက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ "
မဟာဗျူဟာမြောက်ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာအခန်းနှင့်မှတ်တိုင်မြေအောက်သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းများစဉ်ဆက်မပြတ်မိုင်းလုပ်သား, လမ်းခွဲအနိုင်အထက်, ကျောက်မီးသွေး haulage စနစ်များ, highwall မိုင်းလုပ်သား, အိမ်ခေါင်မိုး bolters, utility ကိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်ဒီဇယ်ယာဉ်များပါဝင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာနေစဉ်, Caterpillar တို့အသစ်သောအမိန့်ကိုယူပြီးရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
ဂျွန်ဆင် commented: "Caterpillar တို့အနေနဲ့ကျယ်ပြန့်သတ္တုတွင်းထုတ်ကုန်အစုစုကိုမှကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာသတ္တုတွင်းတခုဆွဲဆောင်မှုရေရှည်စက်မှုလုပ်ငန်းယုံကြည်, ကြှနျုပျတို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, မျက်နှာပြင်နှင့်မြေအောက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆက်လက်။ ကျနော်တို့အမြင့်ဆုံးအမြတ်အစွန်းအလားအလာရှိသူများဒေသများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်သတ္တုတွင်းထုတ်ကုန်အစုစုအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပစ်မှတ်ထားနေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၌နှိမ့်ချ-သံသရာအရှည်ဆုံးမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ဆက်လက်။ ကျနော်တို့ကဤဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလုပ်ရပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားအင်အားအပေါ်လွယ်ကူသောမဟုတ်သိကြ၏ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကဖွင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပျနှံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ "
အဆိုပါကြေညာချက်နှင့် တွဲဖက်. , Caterpillar တို့အခန်းနဲ့မှတ်တိုင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သောရှိရာဟူစတန်, Pennsylvania ပြည်နယ်, အမေရိကန်, ၎င်း၏လုပ်သားအင်အားလျှော့ချရန်လုပ်ရပ်များယူခန့်မှန်းထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အခန်းနှင့်မှတ်တိုင်ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ့်, ကလည်းဟူစတန်စက်ရုံတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပိတ်သိမ်းအပါအဝင်အခြားရွေးချယ်စရာ, အကဲဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအခန်းနှင့်မှတ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်အထိ 155 ရာထူးစုစုပေါင်းလုပ်သားအင်အားလျှော့ချတချို့ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်အတူမျှော်လင့်ထားကြသည်ဖော်ပြထားသည်။ ဤလုပ်ရပ်များကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလက်ရှိအဆုံး-စျေးကွက်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆင့်ဆင့် align ပါလိမ့်မယ်သူကဆက်ပြောသည်။
လမ်းကြောင်းလေ့ကျင့်ထုတ်လုပ်နေကြပြီးဘယ်မှာ Denison တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40 ရာထူးအတွေးလေ့ကျင့်ခန်းထွက်ပေါက်များနှင့်အခြားအဆောက်အဦးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၏ရလဒ်အဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
ဤအရွေ့လျားအပြင်, Caterpillar တို့ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း မှစ. တစ်ရထားလမ်းစက်ရုံတစ်သတ္တုတူးဖော်ရေးကနေဖက်ပြောင်း၎င်း၏ Winston-လမ်, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား, စက်ရုံ repurpose ပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဆင်ရေးတိုးတက်မှုရထားတစ်လုံးလုံးပိုင် Caterpillar တို့လက်အောက်ခံမှလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။
ရလဒ်အနေနဲ့ကကုမ္ပဏီ Decatur, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်၎င်း၏လက်ရှိစက်ရုံမှ Winston-လမ်၎င်း၏စက်ရုံထဲကနေကြီးမားတဲ့သတ္တုတူးဖော်ရေးထရပ်ကားများတွင်အသုံးပြုအချို့သောအစိတ်အပိုင်းများများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပြောင်းရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။
Caterpillar တို့တွင်လည်းသုတေသန, ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်အာရုံစိုက်ကွဲပြားခြင်းကိုဖန်တီးရန်စီစဉ်နေသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စနစ်ကပေါင်းစည်းမှုကိုကယ်နှုတ်တစ်ခုတည်းသုတေသန, နည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှုစက်တင်ဘာလ 1 ရက်မှထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။